Nei iPhone Yangu Ichinonoka? Heino Kugadzirisa! (YePadadowo!) - Iphone
sei internet yangu ye iphone isiri kushanda
nei foni yangu isiri kubatana newifi
mutauri we iphone haashande
maitiro ekuvharidzira anofona id pane iphone 6
charger yefoni haigare mukati
Nei iPhone Yangu Ichinonoka? Heino Kugadzirisa! (YePadadowo!)
Kana iwe uchitenda kuti yako iPhone nePadad zvave zvichinonoka nekufamba kwenguva, iwe unogona kunge wakarurama. Kuderera kwekumhanya kunoitika zvishoma nezvishoma zvekuti zvinoita zvisingaite, asi rimwe zuva unoona kuti yako maapplication ari kupindura zvishoma nezvishoma, mamenyu ane husimbe, uye Safari iri kutora zvachose kurodha mawebhusaiti akareruka. Muchinyorwa chino, ini ndichatsanangura iyo zvikonzero chaizvo nei yako iPhone ichinonoka uye kukuratidza iyo zvigadziriso zvinoita kuti yako iPhone, iPad, kana iPod inomhanya nekukurumidza sezvazvinogona.
Tisati Tatanga: Ndinofanira Kungotenga Iyo Nyowani iPhone kana iPad?
IPhones nyowani nemaPads ane mapurosesa akasimba, uye ichokwadi kuti anokurumidza kupfuura mamodheru ekare. Kazhinji yenguva, zvakadaro, hazvidi kuti utenge iPhone nyowani kana iPad kana yako iri kumhanya zvishoma. Kazhinji, a software dambudziko pane yako iPhone kana iPad ndizvo zviri kukonzera kuti imhanye zvishoma uye kugadzirisa software yako kunogona kuita nyika yemusiyano. Ndizvo chaizvo zviri nenyaya ino.
Izvo Chaizvo Zvikonzero Nei IPhone Yako Iri Kunonoka
Zvese zvigadziriso zvandinotsanangura muchinyorwa chino zvinoshanda zvakaenzana neiyo iPhones, iPads, uye iPods, nekuti vese vanomhanya Apple's iOS inoshanda sisitimu. Sezvatichaona, ndizvo software , kwete Hardware, ndiwo mudzi wedambudziko.
1. IPhone Yako Iri Kunze Kweinowanikwa Yekuchengetedza Nzvimbo
Kufanana nemakomputa ese, iPhones ine yakaganhurirwa nzvimbo yekuchengetera. Iyo yazvino iPhones inouya mune 16GB, 64GB, uye 128GB mhando. (GB inomiririra gigabyte, kana 1000 megabytes). Apple inoreva zviyero izvi zvekuchengetedza se 'kugona' kweiyo iPhone, uye mune izvi, uye kugona kwe iPhone kwakaita senge saizi yedhiraivho rakaomarara paMac kana PC.
Mushure mekunge mave neyako iPhone kwechinguva uye kutora mifananidzo yakawanda, kurodha mumhanzi, uye nekuisa boka remaapp, zviri nyore kupererwa neyekuwanikwa ndangariro.
Matambudziko anotanga kuitika kana huwandu hwenzvimbo yekuchengetera iripo inosvika 0. Ndiri kuzodzivirira nhaurwa yehunyanzvi panguva ino, asi zvinokwana kutaura kuti makomputa ese anoda zvishoma 'imba yekutenderera' kuti software iite zvakanaka.
Ini Ndino Tarisa Sei Yakawanda Yemahara Nzvimbo Inowanikwa Pane Yangu iPhone?
Musoro kune Zvirongwa -> General -> Nezve uye wotarisa iyo nhamba kurudyi kwe'Inowanikwa '. Kana uine zvinopfuura 1GB zviripo, ruka kuenda padanho rinotevera - iri harisi dambudziko rako.
Yakawanda Sei Yekuyeuka Yandinofanira Kusiya Ipo Pane Yangu iPhone?
Iyo iPhone chishandiso chinonyanya kurangarira. Mune ruzivo rwangu, haudi yakawanda inowanika ndangariro kuti zvinhu zvifambe mushe. Zano rangu rekudzivirira inononoka iPhone ndeiyi: Chengeta 500MB yemahara pane zvishoma, uye 1GB yemahara kana iwe uchida kuve wakachengeteka zvachose.
Ndingaite Sei Kuti Ndisunungure Up Memory Pane yangu iPhone?
Neraki, zviri nyore kuteedzera zviri kutora nzvimbo pane yako iPhone. Musoro kune Zvirongwa -> General -> iPhone Kuchengeta uye iwe uchaona ichidzika rondedzero yezviri kutora iyo yakawanda nzvimbo pane yako iPhone.
Mifananidzo inofanirwa kudzimwa uchishandisa iyo Photos mapikicha kana iTunes, asi Mumhanzi uye maAppu anogona kubviswa zviri nyore kubva pachiratidziri ichi. Kune maapplication, ingo rova ​​pazita reapp uye pombi 'Delete App'. ZveMimhanzi, tsvaira munwe wako kubva kurudyi kuenda kuruboshwe pazvinhu zvaungade kudzima, uye tinya 'Delete'.
Unogona kukurumidza kugadzirisa yako iPhone yekuchengetedza nekugonesa zvimwe zvezvinhu zviri pasi pe Kurudziro submenu. Semuenzaniso, kana iwe uchigonesa Dzimisa Kudzima Nhaurirano Dzekare , yako iPhone ichadzima yega mameseji kana zvakanamatira zvawakatumira kana kugashira anopfuura gore rapfuura.
2. Zvese Mapurogiramu ako Akatakurwa Mukurangarira Panguva Imwe (Uye Hauzive Izvo)
Chii chinoitika kana iwe ukavhura boka rose rezvirongwa panguva imwe chete pane yako Mac kana PC? Zvese zvinodzora. Yako iPhone haina kusiyana. Ini ndakafukidza iyi poindi mune zvimwe zvinyorwa, kusanganisira yangu chinyorwa nezve sei kuchengetedza iPhone bhatiri hupenyu , asi zvakafanira kugadzirisa pano zvakare.
Pese paunovhura app, inotakurirwa mukati mememori yekushandisa pane yako iPhone. Paunodzokera kuchiratidziro chemumba, iyo app inovhara, handiti? Zvakashata!
sei ndisina kutora ma podcast angu kutamba
Paunosiya chero app, iyo app ine imwe nguva yekuenda kune yakamiswa nyika, uye theoretically, maapplication haafanire kuve nemhedzisiro diki pane yako iPhone pavanomiswa.
Muzvokwadi, kunyangwe mushure mekusiya app, iyo app inogara yakatakurwa mu iPhone yako RAM. Yese modhi iPhone 6 uye iPhone 6 Plus ine 1GB RAM. Sezvandambotaura pamusoro, iyo iPhone inogonesa ndangariro zvakanyatsonaka, asi kuve nemazhinji maapplication akavhurika panguva imwe chete kunogona kukonzera yako iPhone kudzikira.
Ndeapi maapplication anomiswa paangu iPhone? Uye Ndinovavhara Sei?
Kuti uone maapplication ayo akamiswa mundangariro pane yako iPhone, tinya kaviri bhatani repamba uye iwe uchaona iyo Multitasking maonero. Multitasking inokutendera iwe kuti uchinje nekukurumidza pakati peapps pane yako iPhone, uye zvakare inokutendera iwe kuti uvhare iwo.
Kuti uvhare Anwendung, shandisa munwe wako kuisveta kubva pamusoro pekona. Izvi hazvibvise iyo app, asi iyo zvinoita bvisa iyo app kubva yakamiswa ndangariro pane yako iPhone. Ini ndinokurudzira kuvhara ese ako maapplication kana kamwe chete mazuva mashoma mashoma kuti zvinhu zvifambe mushe.
Ndakaona maPhones aine gumi nemaviri emaapps akamiswa mundangariro, uye kuabvisa kunoita mutsauko mukuru. Ratidza shamwari dzako, futi! Dai vasina kuziva maapplication avo ese aive akatakurwa mundangariro, vanozotenda rubatsiro rwako.
3. Unofanirwa Kuwedzeredza Software Yako
Musoro kune Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridza , uye kana paine software yekuvandudza iripo, tora uye isa.
Asi haigone kugadzirisa software kukonzera kudzikira?
Hongu, vanogona, asi izvi ndizvo zvinowanzoitika mushure mekugadziriswa kwesoftware uye nei imwezve software yekugadzirisa inogadzirisa nyaya yekutanga yakakonzerwa. Ngatienzanisei tichishandisa shamwari yedu yatichati Bob:
Bob anovandudza yake iPad 2 kuenda kuIOS 8. Chaizvoizvo, inononoka chaizvo. Bob akasuruvara.
Bob neshamwari dzake dzese vanogunun'una kuna Apple nezve kunonoka kwake 2 iPad yake.
Apple mainjiniya vanoona kuti Bob akarurama uye anosunungura iOS 8.0.1 kugadzirisa 'mashandiro ekuita' neBob's iPad.
Bob anovandudza iPad yake. Ipad yake haimhanye sezvairi, asi ndizvo zvakawanda zvirinani kupfuura pakutanga.
4. Zvimwe zveZvako Zvirongwa Zviri Zvakadaro Kumhanya Nekumashure
Zvakakosha kune mamwe maapplication kuti arambe achimhanya kunyangwe apfigwa. Kana iwe ukashandisa Anwendung senge Facebook Messenger, iwe ungangoda uchida kunyeverwa pese paunogamuchira meseji nyowani. Izvo zvese zvakanaka uye zvakanaka, asi ini ndinotenda kuti zvakakosha kuti iwe unzwisise zvinhu zviviri zvine chekuita nemaapplication anotenderwa kumhanya kumashure:
Haasi ese maapplication anonyorerwa nevakagadziri vehunyanzvi hwakafanana. Imwe app inomhanya nechekumashure inogona kudzora yako iPhone zvakanyanya apo imwe inogona kuve neisinganzwisisike kukanganisa. Iko hakuna yakanaka nzira yekuyera yega yega maitiro, asi mutemo wechigunwe ndeyekuti vashoma-vanozivikanwa maapuro ane madiki mabhajeti anogona kunge ari kunetsa kupfuura makuru-bhajeti maapplication, kungoita nekuda kwehuwandu hwezvinhu zvinodiwa kuti dzigadzirise yepasirose-kirasi app.
Ini ndinotenda kuti zvakakosha kwazvo kune iwe kusarudza mapurogiramu aunoda kubvumira kuti urambe uchimhanya kumashure kwe iPhone yako.
Ndeapi maApplication Anotenderwa Kuramba Uchimhanya Mumashure Eangu iPhone?
Musoro kune Zvirongwa -> Zvakajairika -> Yekumashure App Refresh kuti uone runyorwa rwemaapps pane yako iPhone ayo parizvino anotenderwa kuti arambe achimhanya kunyangwe iwo asina kuvhurwa.
Ini handikurudzire kudzima Background App Refresh zvachose, nekuti sezvatakambotaura, kubvumira mamwe maapplication kumhanya kumashure ndicho chinhu chakanyatsoita. Panzvimbo iyoyo, zvibvunze wega uyu mubvunzo kune yega yega app:
'Ndinoda here Anwendung iyi kundinyevera kana kunditumira mameseji pandisiri kuishandisa?'
ipad yakanamatira pane itune logo
Kana mhinduro iri kwete, saka ndinokurudzira kuti ubvise Background App Refresh yeiyo chaiyo app. Enda pasi kuburikidza nerondedzero, uye kana iwe wakaita seni, iwe unenge uine chete sarudza mashoma maapplication akasara pane kusvika kumagumo chaiwo.
Kuti udzidze zvakawanda nezve iri basa, Apple's rutsigiro chinyorwa nezve Multitasking uye neApple App Refresh ine ruzivo rwakanaka. Ziva, zvisinei, kuti zvinyorwa zvekutsigira pawebhusaiti yeApple zvinowanzo nyorwa kubva kune inofungidzira maonero, nepo ini ndichitora imwe pragmatic nzira.
5. Dzorera Yako iPhone Kubva uye Kudzoka PaZvezve
Unogona here kudzorerazve yako iPhone kuita iyo yakawanda yemusiyano? Ehe! Kunyanya kana iwe wapedza ese apfuura matanho, kudzima yako iPhone (iyo chaiyo nzira, kwete yakaoma reset) inonatsa iyo iPhone ndangariro uye nekuipa nyowani, yakachena kutanga.
Ini Ndinodzoreredza Yangu iPhone?
Kuti utangezve yako iPhone, tinya uye bata iyo yekurara / Wake bhatani (inonziwo bhatani remagetsi) kusvikira 'Slide kumagetsi kudzima' yaonekwa. Svetera munwe wako pane chiratidziro uye mirira apo yako iPhone masimba kwese kuenda kure. Usashamisika kana zvichitora masekondi makumi matatu kana zvakadaro kuti denderedzwa jena jena rimire kutenderera.
Mushure mekunge yako iPhone yadzimwa, tinya uye bata iyo Kurara / Wake bhatani zvakare kusvikira iwe waona Apple logo kuoneka, uye wozoisiya. Kana iwe wapedza matanho ari pamusoro, iwe uchaona inowoneka inowedzera mukumhanya mushure mekutanga kwayo. Wakarerutsa mutoro pane yako iPhone, uye yako iPhone ichakuratidza kukutenda kwayo nekuwedzera kumhanya.
Mabhonasi Matipi Eiyo Inokurumidza iPhone
Mushure mekunyora chinyorwa ichi pakutanga nemapoinzi mashanu makuru, pane akati wandei zvisingawanzoitika zviitiko zvandinonzwa kuti ndinoda kugadzirisa.
Kurumidza Kumusoro Safari Ne Kuchenesa Saved Webhusaiti Dhata
Kana Safari iri kufamba zvishoma nezvishoma, chimwe chezvikonzero zvakajairika zvekusvinura kumhanya ndechekuti iwe waunganidza mijenya uye yakawanda yakachengetedzwa data rewebhusaiti. Aya maitiro akajairika, asi kana zvakare yakawanda data inovaka kwenguva yakareba, Safari inogona kudzikira. Neraki, kujekesa iyi data kuri nyore.
Musoro kune Zvirongwa -> Safari uye tapira 'Bvisa Nhoroondo uye Webhusaiti Dhata' uyezve 'Bvisa Nhoroondo uye Dhata' zvakare kubvisa nhoroondo, makuki, uye imwe data rekubhurawuza kubva ku iPhone yako.
Dzorerazve Zvese Zvirongwa Kuti Kumhanyisa Zvese Kumusoro
Kana iwe waedza zvese zviri pamusoro uye yako iPhone iri zvakadaro inononoka, 'Seta Zvese Zvirongwa' inowanzove mashiripiti bara iyo inogona kukurumidza zvinhu.
Dzimwe nguva, yakaomeswa marongero faira kana kusanzwisisika kwechimwe chinhu app kunogona kukanganisa iPhone yako, uye kuteedzera pasi iro mhando redambudziko kunogona kuve kwakanyanya, kuomarara.
'Seta Zvese Zvirongwa' inogadzirisazve yako iPhone uye ese ako maapps kune avo ekumisikidza marongero, asi hazvibvise chero maapplication kana dhata kubva kune yako iPhone. Ini ndinongokurudzira kuita izvi kana iwe wapedza zvese zvako zvimwe sarudzo. Iwe uchafanirwa kusaina mumaapps ako zvakare, saka ita shuwa kuti iwe unoziva ako akakosha emazita emushandisi uye mapassword usati wazviita.
Kana iwe wafunga kuti ungade kuedza, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Seta Zvese Zvirongwa kudzorera yako iPhone kudzokera kune yayo fekitori default marongero.
Kana wanga uchinetseka kuti nei iPhone yako ichinonoka, ndinovimba pachokwadi chinyorwa ichi chakubatsira iwe kusvika padanho renhau. Taenda pamusoro pezvikonzero nei maPhones, iPads, uye maPods achinonoka nekufamba kwenguva, uye takurukura nezvekuita kuti yako iPhone ikurumidze. Ndinoda kunzwa kubva kwauri muchikamu chemashoko pazasi, uye senguva dzose, ndichaita zvandinogona kuti ndikubatsire munzira.